इलामको घिउ बोक्ने घोडा, कति किलो सम्म बोक्न सक्छ ? (भिडियो सहित):: Mero Desh
इलामको घिउ बोक्ने घोडा, कति किलो सम्म बोक्न सक्छ ? (भिडियो सहित)
Published on: २३ श्रावण २०७८, शनिबार १२:०१
पुर्वी इलाम! जिल्ला पर्यटकिय स्थल ,विशेष गरि त्यहाँको चिया बगनले त्यस ठाउँलाइ रमणिय स्थल भनेर चिनिन्छ। त्यस ठाउँमा ‘ छुर्पी ,घिउ लगायत धेरै चिज ‘पाइन्छ। देश बिदेश विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरु आएर त्यस ठाउँको स्वभ बढाएर जाने गरेको पाइन्छ’। त्यहाँको मानिसहरु
चौरिको घिउ देखि छुर्पी बनाएर देश भर विभिन्न ठाउँमा बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यहाँका मानिसहरुले गाई ,भैंसी पालेर घिउ पनि प्रशस्त मात्रमा उद्पादन गरेर काठमाडौ जस्ता धेरै शहरहरुमा , बिक्री गर्छन। त्यहाँ घोडाको सहारा मा घिउ बिक्री गर्न एक ठाउँ देखि अर्को ठाउँमा जाने गरेको पाइन्छ।
एउटा घोडाले १०० किलो सम्म घिउ बोक्न सक्ने त्यहाँका स्थानिया एक ब्यक्ति गोबिन्द कार्किले बताउछन। उनले घोडा लिएरै लेक भैसि घिउ पुर्याउने गर्छन्। सवारि साधन गुड्ने बाटो भएता’ पनि बर्षायाममा बाटो भत्किएको हुनाले प्रायजसो घोडाले नै सबै सामान ओसार – पसार गर्ने गरेको बताउछन कार्की ।पूरा समाचार हेर्न तलको भिडियो क्लिक गर्नुहोस् !